Girazi Edging Machine Factory - China Glass Edging Machine Vagadziri uye Vatengesi
11 mota cheni dhijitari 45 degree girazi rinotenderera muchina
Muchina wakagadzirirwa kukuya / kupora pasi kumucheto uye 45 degree mite kumucheto kwegirazi rakatsetseka. Mavhiri mana anoshanda ezasi kumucheto uye mana mavhiri anoshanda iyo ngowani mucheto panguva imwe chete. Makona maviri maviri ane kupera kwakanaka kwazvo. Uku kuita kwepamusoro / mutengo weyakaenzana muchina. Mavhiri mana emoweri kumucheto akagadzika pamushini base, hapana vibration. Conveyor inotora cheni inotumira system. Kushanda kumhanya kunochinjika kuburikidza nekumhanyisa regulator. Kushanda kumhanya uye girazi ukobvu kunoonekwa padhijitari kuratidzwa.
13 mota cheni dhijitari 45 degree girazi rinotenderera muchina unodzora
Muchina uyu une mota nhanhatu dzakagadziriswa mu45 degree, iyo inogona kushandiswa kugadzira 45 degree miter.
Muchina wakagadzirirwa kukuya / kupukuta kumucheto kwakadzika uye 45 degree miter mucheto, uine kumashure arris kukuya.
Conveyor inotora cheni inotumira system ine yakakosha yakatambanudza rabha pad.
Front njanji inotyairwa nemamota uye inofamba yakafanana kuti ienderane neakasiyana magirazi kukora.
otomatiki bhora rinotakura ABB mota girazi rinotenderera muchina wekukorobha
Muchina unoita wezasi kumucheto kukuya / kupukuta pane gorofa girazi, ne arris kukuya.
Conveyor tevera bhora rinotakura ichitumira system, iyo ine matatu mabheyari achiumburuka pamwe akakwirira akapfava simbi magwara, kufamba kwegirazi kwakasimba kwazvo.
Kudzora sisitimu inotora Mitsubishi PLC yekudzora yuniti, iyo ine otomatiki uye echinyorwa kudzora mabasa,
Iwo makuru ekushanda parameter akaiswa uye anoratidzwa kuburikidza neanoshanda interface.
Kushanda kumhanya inogadziriswa nemagetsi.
Chokurukisa anotyairwa yepamusoro ABB Motors.
hupfumi hushoma girazi edging muchina wakaomarara kupera
Muchina wakagadzirirwa kukuya pasi pamucheto wegirazi rakatsetseka, iine arris kukuya. Iyo inokodzera kugadzirwa kwakaomarara pamberi pe tempering uye imwe yekuenderera mberi kugadzirisa. Conveyor inotora cheni inotumira system ine yakakosha yakatambanudza rabha pad.
9 motors girazi reuna muchina inonyanya kufarirwa cheni system
Muchina unoita wezasi kumucheto kukuya / kupukuta pane girazi rakatsetseka, iine arris kupora. Conveyor inotora cheni inotumira system ine yakakosha yakatambanudza rabha pad. Mberi njanji inogona kufambiswa yakafanana kuti ienderane neakasiyana girazi ukobvu. Kushanda kumhanya kunochinjika kuburikidza nekumhanyisa regulator. Iyo arris spindles inotora dhonza mahwendefa mamiriro, pasina vibration mukushanda. Muchina uyu uri nyore kushanda uye une mashandiro akanaka. Vhiri rekupedzisira rinogona kuve rakazvimiririra rakanzwa kupora vhiri kana vhiri rerabha.